आईवटरमार्क # १ आईओएसका लागि - वाटरमार्क फोटोहरू बेर आश्चर्यजनक
आईवटरमार्क # १ आईओएसका लागि - वाटरमार्क फोटोहरू
नवीनतम:2/ 23 / 21
तपाईंको डिजिटल फोटो र कलाकृतिलाई बचाउन वाटरमार्क फोटोहरू
आईवटरमार्क आईफोन र आईप्याडका लागि विश्व नम्बर १ डिजिटल वाटरमार्किंग अनुप्रयोग हो। स्टाइलिश सेकेन्डमा एक फोटो मा तपाइँको प्रतिलिपि अधिकार वाटरमार्क। iWatermark फोटोग्राफरहरूको लागि र द्वारा बनाईएको हो। वाटरमार्क फोटोहरू लिनुहोस्। ब्याच वाटरमार्क। फन्टहरूको विशाल संख्या। वाटरमार्क कलाकृति समावेश छ। वाटरमार्क फोटोहरूको लागि iWatermark सजिलो तरीका हो। मा समीक्षा समीक्षा गर्नुहोस् iTunes App Store र पनि बेर आश्चर्यजनक।
"iWatermark तपाइँको छविहरूमा तपाइँको प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित गर्न मद्दतको लागि एक उत्कृष्ट एप हो। हाम्रा स्तम्भकार र Playboy पत्रिकाका लागि पूर्व वरिष्ठ फोटो सम्पादक, केभिन कुस्टरले आफ्ना छविहरूलाई वाटरमार्क गर्न यो एप नियमित रूपमा प्रयोग गर्छन्। जोआन कार्टर, निर्देशक, TheAppWhisperer द्वारा
वाटरमार्क फोटोहरु आफ्नो फोटो र कलाकृति को रक्षा गर्न।
आईवटरमार्क आईओएस को लागी - वाटरमार्क फोटोहरु
सजिलैसँग आफ्नो फोटो र भिडियोहरू पाठ, ग्राफिक, हस्ताक्षर, QR वाटरमार्कको साथ सुरक्षित गर्नुहोस्। फोटोमा देखिने वाटरमार्क थप्दै यो तपाईंको सिर्जना र स्वामित्वमा रहेको छ। वाटरमार्किंग बढ्दो महत्त्वपूर्ण छ र छविमा तपाईंको नाममा हस्ताक्षर गर्नु जस्तै हो। एक वाटरमार्क subtly प्रदर्शित, तपाईंको फोटो जहाँ जान्छ, यो तपाईंकै हो। वाटरमार्किंग तपाईंको ईमेल, यूआरएल, व्यक्तिगत सन्देश वा मजा ग्राफिक्स कुनै फोटो वा पोकेमोन गो स्क्रिनशट वा भिडियोमा थप्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यसलाई एप्पल अनुप्रयोग स्टोरमा पाउनुहोस्
- टेरी सेतो
फिलिस खरेले कसरी डेभिट मोशन वेबसाइटमा आईवटरमार्क आईओएसको साथ फोटोहरू वाटरमार्क गर्ने समीक्षा गर्दछ
iWatermark, सबै4प्लेटफार्महरू आईफोन / आईप्याड, म्याक र विन्डोज को लागी मात्र पानी मार्किंग उपकरण उपलब्ध छ। iWatermark सबैभन्दा लोकप्रिय पेशेवर वाटरमार्किंग उपकरण हो तपाईंको फोटोहरूमा वाटरमार्क सुरक्षा थप्न।
वाटरमार्क तपाइँको फोटोहरु लाई रक्षा गर्न
- फोटोहरू भाइरल हुन्छन् त्यसपछि उनीहरू विश्वव्यापी रूपमा उड्दछन्। तपाईंको नाम, ईमेल वा url को साथ वाटरमार्क फोटोहरू ताकि तपाईंसँग उनीहरूसँग सँधै दृश्यात्मक र कानुनी सम्बन्ध रहेको छ।
- बहस, महँगो मुकदमेबाजी र साहित्यवाहकहरूबाट टाउको दुख्नेबाट बच्नुहोस् जसले दावी गर्दछन् कि उनीहरूले जान्दैनन् कि तपाईंले यो सृष्टि गर्नुभयो।
वाटरमार्किंग फोटोहरूका लागि आईवटरमार्क सबैभन्दा लोकप्रिय बहु-प्लेटफर्म उपकरण हो। यो उपलब्ध छ IWatermark प्रो को रूपमा म्याक, IWatermark को रूप मा जीत, आईफोन / आईप्याड र Android पनि। iWatermark ले तपाईंलाई कुनै पनि फोटो वा ग्राफिकमा तपाईंको व्यक्तिगत वा व्यवसायिक वाटरमार्क थप्न अनुमति दिन्छ। एकचोटि यो देखिने वाटरमार्कले तपाईंको फोटो र कलाकृतिको सिर्जना र स्वामित्व प्रदर्शन गर्दछ। iWatermark ले तपाईंलाई सिर्जना गर्न दिन्छaग्राफिक, QR वा पाठ वाटरमार्क त्यसपछि अस्पष्टता, रोटेशन, रंग, आकार, आदि परिवर्तन गर्न सम्पादन गर्नुहोस् स्पर्श मार्फत तब ईमेल, फेसबुक, र ट्विटर मार्फत सजिलैसँग साझेदारी गर्नुहोस्। ईमेलको माध्यमबाट फ्लिकरमा साझेदारी गर्नुहोस्।
महत्वपूर्ण: फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा वाटरमार्क गरिएका तस्बिरहरू साझेदारी गर्न, ती अनुप्रयोगहरू आईवटरमार्क खोल्न अघि तपाईंको उपकरणमा स्थापना / कन्फिगर गरिएको हुनुपर्दछ।
आईफोन / आईप्याड / एन्ड्रोइडका लागि अब दुई संस्करणहरू छन्: iWatermark नि: शुल्क र iWatermark। दुई बीचको भिन्नता केवल यो हो कि iWatermark नि: शुल्क एक सानो वाटरमार्क राख्छ जुन भन्छ कि 'iWatermark नि: शुल्क - यो वाटरमार्क हटाउन अपग्रेड' चित्रको तल। नि: शुल्क संस्करणमा नियमित संस्करणमा स्तरवृद्धि गर्न बटन मुख्य पृष्ठमा छ। धेरैले त्यो ठीक फेला पार्नेछन्, अन्यथा त्यो वाटरमार्क हटाउन एक सस्तो अपग्रेड छ। अपग्रेडिंगले iWatermark को विकासलाई समर्थन गर्दछ, यो यस्तो परिष्कृत प्रोग्रामको लागि सानो मूल्य हो।
iWatermark पाठ (नाम, मिति, आदि) र ग्राफिक (हस्ताक्षर, लोगो, आदि) वाटरमार्कको उदाहरणको साथ आउँदछ जुन तपाईं iWatermark जाँच गर्न तुरून्त प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तर चाँडै तपाईं आफ्नो वटरमार्क, पाठ वा ग्राफिक्स सिर्जना गर्न चाहानुहुन्छ। पाठ वाटरमार्कहरू तपाईले सिधा iWatermark मा बनाउन सक्नुहुन्छ र पुन: प्रयोगको लागि बचत गर्न सक्नुहुन्छ। ग्राफिक वाटरमार्कहरू, जस्तै हस्ताक्षर वा लोगोहरू आयात गर्न सकिन्छ:
डिजिटली तपाईंको फोटो / कलाकृति iWatermark को साथ दावी गर्न, सुरक्षित गर्न र तपाईंको बौद्धिक सम्पत्ती र प्रतिष्ठा कायम गर्न हस्ताक्षर गर्नुहोस्। तपाइँको सबै छविहरूमा तपाइँको कम्पनी लोगो राखेर तपाईको कम्पनी ब्रान्ड निर्माण गर्नुहोस्। वेबमा वा विज्ञापनमा कतै तपाईंको फोटो र / वा कलाकृति देखेर आश्चर्यचकित हुनबाट बच्नुहोस्। चोरी र टाउको दुखाइ नगर्नुहोस् जसले दावी गर्छन् कि उनीहरूलाई थाँहा थिएन कि तपाईंले यो सृष्टि गर्नुभयो। आईपी ​​को दुरुपयोग को यी मामिलाहरु मा संलग्न हुन सक्छ कि महँगो मुकदमेबाजी बेवास्ता गर्नुहोस्। बौद्धिक सम्पत्ती स्क्वाबललाई वेवास्ता गर्नुहोस्।
- आईफोन / आईप्याड वाटरमार्क गरिएका फोटोहरू क्यामेरा रोलमा र 'iWatermark' फोल्डरमा जान्छन्।
- एन्ड्रोइड वाटरमार्क गरिएका फोटोहरूमा बाह्य भण्डारणमा 'iWatermarked छविहरू' जानुहोस्।
नेहा सिन्हा १/२१/२१
AppPicker.com को लागी समीक्षक
चाहे तपाईं आफ्नो फोटोहरू साझेदारी गर्ने कुनै तरिका खोज्दै हुनुहुन्छ ताकि तपाईं तिनीहरूको लागि क्रेडिट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, वा तपाईं केवल आफ्नो व्यवसाय प्रवर्धन गर्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ, iWatermark एक शानदार उपकरण हो जसले तपाईंलाई सजिलैसँग सिर्जना गर्न र तपाईंको वाटरमार्क कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्दछ।
संस्करण परिवर्तन log.6.9.3.। को लागि
- निश्चित ब्याच सबै सुविधा
संस्करण परिवर्तन log.6.9.2.। को लागि
- फेसबुक, ट्विटर र वाटरमार्क गरिएका फोटोहरूको इन्स्टाग्राम निर्यात फिर्ता आयो! फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राममा साझेदारी गर्न ती अनुप्रयोगहरू स्थापना र लग इन हुनुपर्दछ।
- प्रमुख फेसलिफ्ट (हल्का / गाढा यूआई मोडहरू अब समर्थित छन्)
- पाठ वाटरमार्क रंग पिकर अपग्रेड। धेरै विकल्पहरू। योसँग एक आईड्रोपर पनि छ जसले फोटोमा प्राथमिक रंगहरू मध्ये एउटा छनोट गरेर वाटरमार्क गर्न अनुमति दिन्छ। यो र more्ग प्रयोग गर्न धेरै सूक्ष्म छ जुन वाटरमार्क र forको लागि फोटोमा पहिले नै अवस्थित छ।
- बहु फोटो पिकर अपग्रेड
- xcode को संस्करण १२..12.4 मा संकलित
- आईओएस १२-१-12..14.4 र उच्चसँग उपयुक्त
- साथै अन्य साना तर महत्त्वपूर्ण सुधारहरू
एकचोटि यो दृश्यात्मक वाटरमार्क थपियो तपाईंको फोटो र कलाकृतिको तपाईंको सिर्जना र स्वामित्व प्रदर्शन गर्दछ। iWatermark ले तपाईंलाई ग्राफिक, QR वा पाठ वाटरमार्क सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ त्यसपछि तिनीहरूलाई अस्पष्टता, रोटेशन, रंग, आकार, आदि परिवर्तन गर्न सम्पादन गर्नुहोस् मार्फत सजिलै ईमेल मार्फत साझेदारी गर्न, फेसबुक, र twitter। साझेदारी गर्नुहोस् फ्लिकर ईमेल मार्फत।
आईओएस १ Comp अनुकूलता
महत्वपूर्ण: यदि तपाइँ आईओएस १ using प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ र एप्पलले तपाईलाई सबै फोटोहरू प्रयोग गर्नका लागि अनुमतिको लागि यो नयाँ संवाद राख्छ। किन? सरल, किनभने अनुप्रयोगले तपाईंको फोटोहरू प्रदर्शन गर्न उनीहरूलाई प्रदर्शन गर्न आवश्यक पर्दछ, तपाईंलाई केहि निश्चित चयन गर्न अनुमति दिनुहोस् र तिनीहरूलाई वाटरमार्क गर्नुहोस्। जब तपाईं अनुप्रयोग पहिलो प्रयोग गर्नुहुन्छ एप्पलले यो अनुमतिहरू संवाद राख्दछ। यो अनुमति ठीकसँग सेट गर्न आवश्यक छ तपाईंको फोटोहरूमा पहुँच गर्न सक्षम नहुने समस्याबाट बच्न। यदि तपाईंले फोटोहरू वा वाटरमार्किंग चयन गर्दै मुद्दा फेला पार्नुभयो किनकि यो तपाईं तल विकल्प चयन गर्नुहुन्न।
कुनै पनि समयमा तपाईं सेटिंग्स परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ 'सेटिंग्स' अनुप्रयोगमा ट्याप गरेर र iWatermark मा धेरै शीर्ष प्रकार मा र त्यसपछि यो चयन भएको छ जब यो देखा पर्दछ। 'फोटो' सेटिंगलाई 'सबै फोटोहरू' मा परिवर्तन गर्नुहोस्
त्यहाँ दुई नि: शुल्क अनुप्रयोगहरू छन्:
iWatermark नि: शुल्क (एन्ड्रोइड)
आईवटरमार्क लाइट (आईओएस)
iWatermark (आईओएस र एन्ड्रोइड) सशुल्क संस्करण आइकन
भुक्तान गरिएको संस्करणले iWatermark को जारी विकासलाई समर्थन गर्दछ। प्रत्येक चोटि कसैले प्रतिलिपि खरीद गर्दा यसले अनुप्रयोगलाई सुधार गर्न थप प्रोग्रामि programming समर्थन गर्दछ जसले सबैलाई फाइदा पुर्‍याउँछ। हो! भुक्तान गरिएको अनुप्रयोगले तपाईंको फोटोमा हाम्रो वाटरमार्क थप गर्दैन। नियमित संस्करण किन्नु यस अनुप्रयोगमा हाम्रो निरन्तर काम समर्थन गर्दछ। धन्यवाद!
महत्वपूर्ण: आरईमेल, खरीद पछि फ्री संस्करण मेट्नुहोस्। यसले तपाईलाई भ्रमित गर्न सक्छ र तपाईलाई अब यो आवश्यक पर्दैन।
महत्वपूर्ण: के तपाईं आफ्नो वाटरमार्क गरिएका फोटोहरू अधिक व्यक्तिहरूद्वारा हेर्न चाहानुहुन्छ? IWatermark अनुसरण गर्नुहोस्ट्वीटर, - फेसबुक, @ इन्स्टग्राम, @Pinterest, इत्यादि) र तपाइँको उत्तम आर्टवर्कहरू ट्याग गर्नुहोस् # iWatermark फिचर गर्नका लागि!
म्याक / विन: यदि तपाईं हाम्रो म्याक वा विन सफ्टवेयर जाँच गर्न चाहानुहुन्छ, हाम्रो साइटमा आउनुहोस् र नि: शुल्क ट्राउट डाउनलोड गर्नुहोस्। आईकलोकलाई एउटा प्रयास दिनुहोस् यो आवश्यक / उपयोगी / रमाईलो छ र पुरानो एप्पल मेनूबार घडी भन्दा १० गुणा बढी राम्रो छ।
iWatermark गम्भीर गजबको छ। म यो भन्न सक्दछ किनकि मैले म्यानुअल लेखेको थिएँ र प्रोग्रामिंग गरेन। म दुबै iWatermark र iWatermark + मेरो काममा र मनोरन्जनको सबै समयमा प्रयोग गर्दछु। एकछिनका लागि नसोच्नुहोस् कि सबै वाटरमार्किंग उपकरणहरू एक समान छन्। iWatermark सबै भन्दा राम्रो हो। तर अर्को चरण भनेको iWatermark + हो जुन आमूल रूपमा भिन्न र अविश्वसनीय रूपले शक्तिशाली छ। अनुप्रयोगमा प्रोग्रामिंगको एक विशाल रकम छ। प्रयोगकर्ता ईन्टरफेस सुन्दर ढंगले कसरी फोटोग्राफरहरू काम गर्दछ। यसको लागि मेरो शब्द नलिनुहोस्, हेर्नुहोस् मार्गदर्शन or iWatermark + को लागी नि: शुल्क संस्करण कोशिस गर्नुहोस् जस्तै तपाईंले iWatermark को लागी गर्नुभयो।
IWatermark डाउनलोड गर्नुभएकोमा धन्यवाद! वाटरमार्किंग फोटोहरूका लागि आईवटरमार्क सबैभन्दा लोकप्रिय बहु-प्लेटफर्म उपकरण हो। यो उपलब्ध छ IWatermark प्रो को रूपमा म्याक, IWatermark को रूप मा जीत, आईफोन / आईप्याड र Android पनि। iWatermark ले तपाईंलाई कुनै पनि फोटो वा ग्राफिकमा तपाईंको व्यक्तिगत वा व्यवसायिक वाटरमार्क थप्न अनुमति दिन्छ। एकचोटि यो देखिने वाटरमार्कले तपाईंको फोटो र कलाकृतिको सिर्जना र स्वामित्व प्रदर्शन गर्दछ। iWatermark ले तपाईंलाई सिर्जना गर्न दिन्छaग्राफिक, QR वा पाठ वाटरमार्क त्यसपछि अस्पष्टता, रोटेशन, रंग, आकार, आदि परिवर्तन गर्न सम्पादन गर्नुहोस् स्पर्श मार्फत तब ईमेल मार्फत सजिलैसँग साझेदारी गर्नुहोस्, फेसबुक, र twitter। साझेदारी गर्नुहोस् फ्लिकर ईमेल मार्फत।
ग्राफिक वाटरमार्कका लागि तपाई कुनै पनि ग्राफिक प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ तर ती पारदर्शी पृष्ठभूमि भएको ग्राफिक्स हुनुपर्दछ। नमूना हस्ताक्षर, प्रतीक र अन्य ग्राफिक्स हामी पारदर्शी पृष्ठभूमि छ र .png फाईलहरू हो। यसको मतलब हस्ताक्षर आफैं देखिन्छ तर पृष्ठभूमि पारदर्शी छ र फोटो तल देखाउँदछ। यो गर्नको लागि फाइल ढाँचालाई .png भनिन्छ र यसले पृष्ठभूमि पारदर्शी हुन अनुमति दिन्छ (a .jpg ले यो पारदर्शितालाई अनुमति दिदैन, .png प्रयोग गर्नुपर्दछ)।
यो विशेष उपकरण हो जुन हामीले विशेष रूपमा तपाईंको हस्ताक्षर र कला आयात गर्न सिर्जना गर्‍यौं ताकि तपाईंले आफ्नो कम्प्युटरमा यो कसरी गर्ने भनेर सिक्नुपर्दैन। पहिले तपाईको हस्ताक्षर कालो पेनमा हस्ताक्षर गर्नुहोस् (कुनै बाक्लो तर पछि कलम र सानो भन्दा जादुको मार्कर उत्तम छ) प्रयोग गरी धेरै सेता कागजमा। अर्को मुख्य पृष्ठबाट ग्राफिक वाटरमार्क सिर्जना गर्नुहोस् चयन गर्नुहोस् त्यसपछि स्क्यान हस्ताक्षर चयन गर्नुहोस्।
एकचोटि तपाईंले त्यसो गर्नुभयो भने फोटो खिच्न क्यामेरा खुल्नेछ। त्यसोभए राम्रो उज्ज्वल प्रकाशमा छाया बिना तपाईंको हस्ताक्षरको फोटो लिनुहोस्। तपाइँ तपाइँको हस्ताक्षर को साथ स्क्रीन भर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो राम्रो देखिन्छ प्रयोग बटनमा हिट देखिन्छ र यसले तुरून्त तपाईंको हस्ताक्षरको पृष्ठभूमिमा पारदर्शिता थप्नेछ र आयात गर्नुहोस् र जुन तपाईंले सुरुमा छनौट गर्नुभएको फोटोको शीर्षमा राख्नुहुनेछ। अब 'सम्पादन' मेनू आईटममा क्लिक गरेर तपाईं अस्पष्टता, कोण, सामान्य तरीकामा मापन परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ। जब तपाईं बचत गर्नुहुन्छ, यसले तपाईंको हस्ताक्षरलाई वाटरमार्कको रूपमा बचत गर्दछ जुन तपाईं कुनै पनि समय प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंले यसलाई केहि चोटी गर्न आवश्यक पर्दछ यो ठीक मात्र पाउनका लागि। महत्वपूर्ण: यसले त्यो फोटोलाई वाटरमार्क गर्दैन। यो फोटो वाटरमार्कको सिर्जनाको बेलामा पृष्ठभूमि मात्र हो। एकचोटि तपाईंले वाटरमार्क सिर्जना गरेर सुरक्षित गर्नुभयो भने तपाईं भविष्यमा कुनै पनि फोटोमा यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
२) म्याजिक वान्ड सबै पृष्ठभूमि तपाई पारदर्शी हुन चाहानुहुन्छ। त्यसो भए मेट्नुहोस्। तपाइँ चेकरबोर्ड पृष्ठभूमि संग छोडिनुभयो। यदि तपाईंले चेकरबोर्ड (कुनै पृष्ठभूमि छैन) देख्नु भएन भने त्यहाँ अरू लेयरहरू हुन सक्छन् तपाईलाई लुकाउन वा मेटाउन आवश्यक पर्दछ।
तपाईंले पठाउनुभएको ग्राफिकमा टच गर्नुहोस् र होल्ड गर्नुहोस्। यस अवस्थामा यसको आईके आइकन। त्यो तलको संवाद पप अप गर्दछ। "क्यामेरा रोलमा बचत गर्नुहोस्" बटन क्लिक गर्नुहोस्।
एन्ड्रोइड ग्राफिक्समा सीधा sdcard / iWatermark / वाटरमार्क फोल्डरमा पनि राख्न सकिन्छ र त्यसपछि iWatermark मा प्रयोग गर्न सकिन्छ।c IWatermark मा आयात गर्नुहोस्
QR कोड के हो? QR भनेको द्रुत प्रतिक्रिया र यसको एक प्रकारको बारकोड हो जसले धेरै जानकारी समात्न सक्छ। मा अधिक जान्नुहोस् विकिपीडिया। आईफोन / आईप्याडका लागि आईवाटरमार्कले तपाईंलाई क्यूआर कोडमा मितिको बहु लाइनहरू ईन्कोड गर्न अनुमति दिन्छ जुन वाटरमार्कको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। आईफोनमा धेरै अनुप्रयोगहरूले QR कोडहरू डिकोड (स्क्यान र पढ्न) सक्छन्, एउटा आईफोन भनेको क्यामेरालाई क्यूआर कोडमा दर्साउँछ र यसले युआरएल देखाउँदछ र सोध्छ यदि तपाईं त्यो लिंकमा जान चाहानुहुन्छ भने। आईट्यून्स अनुप्रयोग स्टोरमा अधिक खोज्नको लागि खोजी बाकसमा 'QR कोड' टाइप गर्नुहोस् QR कोडहरू डिकोड गर्ने अनुप्रयोगहरू फेला पार्न। एन्ड्रोइडसँग एक अनुप्रयोग छ जुन डिफल्ट अनुप्रयोगको रूपमा आउँदछ जुन QR कोडहरू पढ्छ जसलाई 'बारकोड स्क्यानर' भनिन्छ। यो राम्रो हो किनकि जब यो QR कोडमा URL भेट्दछ भने यसले ब्राउजर खोल्छ र तपाइँलाई सिधा साइटमा लैजान्छ।
'ग्राफिक वाटरमार्क सिर्जना गर्नुहोस्' अनुसरण गर्नुहोस् (माथिको) बाँया साइड EDIT मेनूमा QR कोड छनौट गर्नुहोस् (माथिको स्क्रीनशट हेर्नुहोस्)। तपाईंले सode्केतन गर्न चाहनुहुने डाटा प्रविष्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि GENERATE बटनमा थिच्नुहोस्। यसले QR कोड सिर्जना र घुसाउँदछ। यसलाई उपयुक्त नामको साथ बचत गर्नुहोस्। अब कुनै पनि समय तपाई यस QR कोड को लागी एक फोटो वाटरमार्क गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि तपाईंले QR कोड सिर्जना गर्नुभयो यसको परीक्षण गर्न यो राम्रो छ।
आईओएस the सेटिंग्स मा जानुहोस्: गोपनीयता: स्थान सेवाहरू: र यो सुनिश्चित गर्नुहोस् कि iWatermark सकृय छ। हामी स्थान डाटा प्रयोग गर्दैनौं तर कामका लागि बहु चयनका लागि यसलाई खोल्नु आवश्यक पर्दछ।
माथीको स्क्रीनशटमा सुरू गर्नका लागि एउटा तस्विर अधिक छान्नुहोस्। मुख्य 'स्क्रीन' मा 'भयो' बटन थिच्नुहोस् वाटरमार्क बटन छनौट गर्नुहोस् र तपाईंको वा हाम्रो वाटरमार्क मध्ये एक छान्नुहोस्। तपाईंले सेयर गरेपछि (एल्बमहरू वा फेसबुकमा बचत गर्नुहोस्) यसमा प्रत्येक फोटोको तर्फबाट जान्छ र जहाँ तपाईं चाहानुहुन्छ बचत गर्न सक्नुहुन्छ (एल्बम, फ्लिकर, फेसबुक, आदि)।
A: दुई बीचको भिन्नता केवल यो हो कि iWatermark नि: शुल्क एक सानो वाटरमार्क राख्छ जुन भन्छ कि 'iWatermark निःशुल्क - यस वाटरमार्क हटाउन अपग्रेड' एक तस्वीरको तल। नि: शुल्क संस्करणमा नियमित संस्करणमा स्तरवृद्धि गर्न बटन मुख्य पृष्ठमा छ। धेरैलाई त्यो पर्याप्त लाग्नेछ। अन्यथा त्यो वाटरमार्क हटाउन अपग्रेड गर्नुहोस्। अपग्रेडिंगले iWatermark को विकासलाई समर्थन गर्दछ, यो यस्तो परिष्कृत प्रोग्रामको लागि सानो मूल्य हो।
Q: मैले बचत गरे किन मैले मेरो वाटरमार्क गरिएको फोटो फेला पार्न सकेन?
Q: Android संस्करणले कहाँ फाइलहरू बचत गर्दछ?
A: जब तपाइँ पहिलो पटक एन्ड्रोइड संस्करण सुरू गर्नुहुन्छ, यसले एक संवाद राख्दछ जुन भन्छ, "सहयोगी टिप: यस अनुप्रयोग प्रयोग गरेर वाटरमार्क गरिएका तस्बिरहरू तपाइँको बाह्य भण्डारणमा 'iWatermarked Images' चिन्ह लगाइएको फोल्डर भित्र बचत हुन्छ। तपाईं ती फाईल ब्राउजर अनुप्रयोग वा थ्रु ग्यालेरी प्रयोग गरेर पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ।
Q: मैले फोटो, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, टम्बलर, इत्यादिमा राख्नु भएका फोटोहरू किन वाटरमार्क गर्नुपर्दछ?
.Zip मा डेस्कटप व्यक्तिको विस्तारको नाम परिवर्तन गर्नुहोस्। त्यसैले अब यसलाई iWatermark.zip नाम राख्नुपर्दछ
Q: म मेरो फोटोहरू को लागी देखी वाटरमार्क को रूप मा मेरो हस्ताक्षर को उपयोग गर्न चाहान्छु। म कसरी ग्राफिक्स थप्न सक्छु उदाहरणको लागि हस्ताक्षरहरू पिकासो, बेन फ्रान्कलीन, आदि द्वारा।
तपाईंको कम्प्युटरमा ग्राफिक्स बनाउनुहोस् र आफैंमा फाइल ईमेल गर्नुहोस्, फोटो लाइब्रेरीमा संलग्न फाइल बचत गर्नुहोस्। त्यहाँ यो आईफोन फोटो पुस्तकालयमा हुनेछ जहाँ तपाईं यसलाई iWatermark भित्रबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंको फोटोहरू वाटरमार्कमा।
A: केहि अनुप्रयोग निर्माताहरू तपाइँले दुई पटक भुक्तान गर्न चाहन्छन्। हामी गर्दैनौं। समान iWatermark आईफोन र आईप्याड मा ठीक काम गर्दछ। कानूनी रूपमा तपाईं दुबै को मालिक हुनुहुन्छ र तपाईं दुबै मा आफ्नो सफ्टवेयर हुन सक्छ। तर कृपया तपाइँका साथीहरूलाई एक किन्नको लागि प्राप्त गर्नुहोस् वा एक राम्रो star स्टार समीक्षा राख्नुहोस् आइट्यून्स अनुप्रयोग स्टोरमा यसको मात्रै। and5 र सेबले त्यसको एक तिहाई पाउँदछ। ती दुबैले हामीलाई विकसित, प्रोग्रामिंग र अनुप्रयोग सुधार गर्न मद्दत गर्छन्।
व्यक्तिहरू iWatermark लाई मन पराउँछन्। यति धेरै भयो कि हामीले पत्ता लगायौं कि हामी सुविधाहरू र प्रयोगकर्ता इन्टरफेस अपग्रेड गर्न सक्दैनौं किनकि तिनीहरूलाई यो मन परेको छ र यसलाई परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्न। त्यसकारण जब हामीसँग नयाँ इन्टरफेस (प्रोग्राम सञ्चालन गर्ने तरिका) र नयाँ सुविधाहरू iWatermark मा फिट नहुँदा हामी यसलाई परिवर्तन गर्न सक्दैनौं भने नयाँ अनुप्रयोग सिर्जना गरेर यसलाई iWatermark + भन्ने नामको संस्करणको लागि विचारहरू थिए।
आईवटरमार्कले अधिकांश मान्छेले पाएको पानीको आवश्यकतालाई पूरा गर्छ। तर फोटो जर्नलिस्टहरू, पेशेवर फोटोग्राफरहरू र बढी आवश्यकता भएका मानिसहरूलाई iWatermark + सिर्जना गरिएको थियो। योसँग धेरै iWatermark प्रकारहरू छन्, तपाईं एक साथ धेरै वाटरमार्कहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, र धेरै चीजहरू गर्नुहोस् जुन iWatermark मा सम्भव छैन। धेरैले यो भन्छन् कि यो धेरै डेस्कटप अनुप्रयोगहरू भन्दा शक्तिशाली छ। डेस्कटप अनुप्रयोगहरूको मूल्य र iWatermark + मा प्रोग्रामिंगको घण्टाको ठूलो संख्या विचार गरी यो पनि एक चोरी हो। त्यसोभए तपाईंसँग हाम्रा दुबै अनुप्रयोगहरू छन्। तपाईं सजिलैसँग iWatermark बाट iWatermark अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। IWatermark + र कसरी अपग्रेड गर्ने बारे जानकारीको लागि यहाँ ट्याप गर्नुहोस्।